Degmada Elverum oo sharuudo dul dhigtay dadka u safra degmooyinkii dhawaan la xiray. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Degmada Elverum oo sharuudo dul dhigtay dadka u safra degmooyinkii dhawaan la...
Degmada Elverum oo sharuudo dul dhigtay dadka u safra degmooyinkii dhawaan la xiray.
Qurbaha.net Oslo:- Warbixin ay soo dhigeen Kamuuna Elverum ee Gobolka Inlandet ayaa lagu sheegay inay ku dhiiragelinayaan dadka degan Elverum iyo kuwa martida ah in ay feejignaan badan u yeeshaan xaalada ka jirta degmooyinkii dhawaan loo xiray cudurka cusub dartiis ee bariga Norwey.
Dhawaan Xukuumada Norwey ayaa xirtay 1o degmo oo kala ah: Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler ee Østfold iyo Ås kadib markii lagu arkay nuucyo ka mid ah Karoonaha is bed bedalaya ee aduunka ku cusub.
Arintaasi kadib ayay ELverum xalay soo saareen sharuudahaan hoos ku xusan.
Dadkii ku sugnaa Nordre Folle 10-kii maalmood ee la soo dhaafay, waxaan si adag kula talineynaa in ay galaan karantiil guriga ah 10 maalmood laga bilaabo waqtigii ay joogeen Nordre Follo. Hadii uu isku arko qofku calaamado xanuuna uu taleefonka Karoonaha la xariiro si loo baaro.
Dadkii ku sugnaa mid ka mid ah 9-ka degmo ee xadka la leh Nordre Follo 10-kii maalmood ee la soo dhaafay waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan Xaaladahooda hadii ay jiraan calaamado muujinaya , qandho iyo madax-xanuun waxaa lagula talinayaa in ay joogaan guryahooda kadibna ay la xariiraan taleefanka Karoonaha baaritaana ay maraan, waana inay xadidaan xiriirka bulshada ay la leeyihiin 10-ka maalmood laga bilaabo markii ay joogeen mid ka mid ah degmooyinkaas. Sagaalka degmo ee ay quseyso ayaa kala ah: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler ee instfold iyo Ås.
Hadday dadku ku sugnaayeen mid ka mid ah 9-ka degmo ee xadka la leh Nordre Follo 10-kii maalmood ee la soo dhaafay oo hawlo fara badan oo bulsheed ay qabteen intii ay halkaas joogeen, waa inay ku shaqeeyaan Xafiiska guryaha halka kuwa aan shaqeyna ay ka joogaan iskuulada 10 maalmood laga bilaabo markii ay joogaan sagaalka degmo eee xaniban.
Xaaladahaas oo ay dad ka mid ahaa tobanka degmo ay horumar ka sameeyeen, waxaan ku dhiirrigelinaynaa dadka ay xiriirka dhaw la leeyihiin inay go’doomiyaan oo ay soo wacaan taleefanka kooroonaha ee degmada si loo baaro.
Waxaan ku dhiiri galineynaa dhamaan dadka degan Elverum ineysan u safrin dowladaha hoose ee dhawaan dowladdu ay ka soo saartay talaabooyinka xayiraada ah.
Dadka ku tiirsan socdaallada lagama maarmaanka u ah ama uga imanaya degmooyinka ay dhibaatadu saameysey tallaabooyinka dowladda, waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka fogaadaan dhammaan xiriirka bulshada. Taasi macnaheedu waa in aysan ka qeybqaadan abaabulada ee arimaha buslahda iyo aktivitet-yada kale.
Rakaabka u safra mid ka mid ah degmooyinkan ayaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa inay ka fogaadaan dhammaan safarada aan daruuriga aheyn. Haddii ay tahay inaad sameyso safar lama huraan ah, waa inaad sida ugu macquulsan uga fogaato la xiriirka bulshada intaad joogto banaanka.
Arintaani ayaa timid kadib markii dhawaan 10-kaa degmo laga heley nuuc cusub oo karoona Feyrus ah kaasoo mar sii horeysay lagu arkay dalka Enlgalnd, waxaana taasi ay sababtay in wadamo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Sweden iyo Filand ay xuduudaha ka xirtaan Norwey.
Previous articleDeg Deg Finland oo ku soo biirtay wadama Xuduudaha ka xirtay Norwey.
Next articleErna Solberg ”Qof kasta oo aan deganeyn Norwey Xuduudaha wey ka xiranyihiin “